May 2018 – PwintsSan
May 20, 2018 twl 0
၁၀၀၀ ကျပ်တန် ငွေစက္ကူတရွက်ကို ကာလာပရင့်တာဖြင့် နံပတ်တခုတည်း ရွက်ရေ များများ ထုတ်ကာ YBS ယာဉ်စီး ခပေးနေမှုများ ရှိနေကြောင်း ဗန္ဓုလသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ဒါရိုက်တာ ဦးမင်းနိုင်က News Watch သို့ပြောသည်။ ကာလာပရင့်တာဖြင့် ထုတ်ထားသော ၁၀၀၀ ကျပ်တန် ငွေစက္ကူအား ယာဉ်စီးခအဖြစ် […]
၃မိနစ်လောက် အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ကြည့်စေချင်တယ် တစ်ခါက အငြိမ်းစား ကျောင်းဆရာတစ်ယောက်နဲ့ ဘဏ်မန်နေဂျာဟောင်းတစ်ယောက်တို့ အိမ်နီးနားချင်းတွေဖြစ်ကြသတဲ့။ အလုပ်ကလည်း အနားယူပြီးပြီဖြစ်လို့ နှစ်ယောက်စလုံးက ခြံထဲမှာ သစ်ပင်စိုက်ဖို့ စိတ်ကူးရကြတယ်။ ဒီမှာ ထူးခြားချက်က ဘဏ်မန်နေဂျာက ခေတ်မီနည်းစနစ်တွေကို သိပ်ယုံကြည်အားကိုးတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပ်ါတယ် နှစ်ယောက်သား အမျိုးအစားတူ သစ်ပင်လေးတစ်ပင် ခြံထဲကိုယ်စီ စိုက်ကြတယ်။ ကျောင်းဆရာဟောင်းကတော့ […]
(ကောင်း လွန်းလို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ပေးပါ။ ဖတ်ပြီးလျှင်လည်း တပါးသူများကို ပြန်လည်ပို့ချပေးပါ။ ) ၁။ ဝင်ငွေမ ကောင်းတဲ့အခါချွေတာသုံးစွဲတာ အကောင်းဆုံးယတြာ။ ၂။ လမ်းသွားတဲ့အခါကြီးမားတဲ့ဝီရိယထားခြင်းဟာအန္တရာယ်ကင်းဖို့ အတွက် အကောင်းဆုံးယတြာ။ ၃။ ရန်လိုနေတဲ့လူနဲ့ဖက်ပြိုင်ပြီးမငြင်းတာ အကောင်းဆုံးယတြာ။ ၄။ ဒေါသထွက်စရာ ကြုံတဲ့အခါစိတ်ဖြေသာတဲ့နေရာကို ရှောင် ထွက်သွား […]
ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ မိန်းမတစ်ယောက် မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ ပြင်ဆင်ကြတယ်။ ယောက်ျားမှာ စုထားတဲ့ငွေ သိန်း ၂၅ဝရှိတယ်၊ မိန်းမမှာက သိန်း ၂ဝဝရှိတယ်။ (ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုအဖြစ် ရေးပါတယ်) မင်္ဂလာမဆောင်ခင် ယောက်ျားရဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ အိမ်ခန်းတစ်ခန်း အရစ်ကျဝယ်လိုက်တယ်၊ မိန်းမရဲ့ပိုက်ဆံကို အိမ်အပြင်အဆင် အသုံးအဆောင်တွေအတွက် သုံးလိုက်တယ်။ မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတဲ့နောက် ယောက်ျားက သူရတဲ့လခထဲကနေ လစဉ်အိမ်ခန်းခအရစ်ကျဆပ်တယ်၊ကျန်ငွေကိုစုတယ်။ […]
နေပူထဲတွင် ရေသန့်ဘူး ကြာရှည်စွာထားပါက ကော်ဘူးသည် အပူနှင့် ဓာတ်ပြုပြီး ကင်ဆာဖြစ်ပွားနိုင်သည်ကို ရေသန့်ဘူး သောက်သုံးသူများအနေနှင့် သတိပြုသင့်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူများ ကာကွယ်ရေးအသင်းမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဗအုပ်ခိုင်က မေလ ၂၀ ရက်တွင် အကုန်သိသတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။ “ အခုလိုနေပူတဲ့ကာလမှာဆို ပိုဆိုးတယ်။ အအုပ်အဆောင်းမပါဘဲ နေပူထဲ ရေသန့်ဘူးတွေ […]
လက်ထပ်ပြီးတာ ၃ လတောင်မရှိသေးတဲ့ ဆရာဝန်လင်ယောက်ျား၏ နှိပ်စက်တာမခံနိုင်တော့လို့ ဆက်မပေါင်းနိုင်တော့ကြောင်း ကြေငြာလိုက်တဲ့ ဆရာဝန် အမျိုးသမီး…
လက်ထပ်ပြီးတာ ၃ လတောင်မရှိသေးတဲ့ ဆရာဝန်လင်ယောက်ျား၏ နှိပ်စက်တာမခံနိုင်တော့လို့ ဆက်မပေါင်းနိုင်တော့ကြောင်း ကြေငြာလိုက်တဲ့ ဆရာဝန် အမျိုးသမီး ချစ်ဝင်းစိုး (Chris Soe)ရဲ့ နှိပ်စက်မှူဒဏ်ကို မခံနိုင်တော့ သဖြင့် ဆက်မပေါင်းသင်းနိုင်တော့ပါကြောင်း၊ သူနှင့် လုံးဝ မသက်ဆိုင်တော့ပါကြောင်း။ မင်္ဂလာပွဲကျင်းပပြီး ၃ လ တောင်မပြည့်သေး ယခုဟာ သုံးကြိမ်မြောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် […]
ပြင်​ဦးလွင်​တွင်​ လူရမ်းကားတစ်​စု၏ မတရားစ​ကေဘာဖြင့်​အထိုးခံရ​သော ဒုဗိုလ်​မှူးကြီး မိုးမြင့်​​အောင်​၏ သံ​ဝေဂ ( ယခုအခါပြန်​လည်​​ကောင်းမွန်​ပါပြီ)
ဝဋ်ကြွေးရှိက အကြေဆပ်ရပါမည် ဖြစ်စဉ်အကျဉ်း လွန်လေပြီးခဲ့သော ဘဝပေါင်းများစွာမှာ မိမိဘာအကုသိုလ်တွေ လုပ်ခဲ့မိလည်း မသိခဲ့ပါ ၊ အမြဲမှန်ကန်တဲ့ လောကနိယာမဖြစ်တဲ့ ကိုယ်စိုက်တာ ကိုယ်ပြန်ရိတ်သိမ်းရမဲ့အချိန် ကို ရောက်ရှိလာတော့ မိမိလည်း ၂၅.၄.၂၀၁၈ ညချမ်းချိန်ခါ ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီးအား နှိပ်နယ်ဝတ်ဖြည့်အပြီး အိမ်ကိုပြန်လာတဲ့လမ်းမှာ ဆိုင်ကယ်စတန့် ထွင်စီးသူ […]
အကြောဆေး သွင်းကြဦးမလား ရပ်ကွက်ထဲက၊ရွာထဲက၊လမ်းထဲက ဆေးခန်းတွေမှာ ခေတ်စားတဲ့ အသုံးအနှုန်းတခု ရှိပါတယ်။ကျွန်တော့်ကို/ကျွန်မကို အကြောဆေးလေးသွင်းပေးပါ၊ပုလင်းချိတ်ပေးပါ၊ဆေးရောင်စုံလေး လွှတ်ပေးပါတဲ့။ဒါတွေဟာ လူနာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ဆရာဝန်ပဲဖြစ်ဖြစ် ရင်းနှီးပြီးသား စကားတွေပါ။တချို့ဆိုရင် အကြောဆေးလေးများ တလတခါလောက်မှ မ’လွှတ်’လိုက်ရရင် (မသွင်းလိုက်ရရင်) နေမထိထိုင်မသာဖြစ်ပြီး လက်က ကပ်သလိုလို၊ဇက်ကြောက တက်သလိုလို ဖြစ်လာတတ်တယ်လို့လည်း ဆိုပါသေးတယ်။ဒီအကြောဆေးဆိုတာ ဘာလဲ၊ဘာတွေ ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်ရှိသလဲ၊ဘာလို့ ထိုးကြတာလဲ၊တကယ်ရော […]
ကျွန်ုပ်တို့ စားသုံးတဲ့ ကြက်ဥက ကျန်းမာရေးနဲ့ကိုက်တဲ့ သဘာဝကြက်ဥ ဟုတ်မဟုတ် ခွဲခြားသိရဖို့ ခက်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ကြက်ဥဖြစ်မဖြစ် အတည်ပြု သတ်မှတ်ဖို့ ဒီဆောင်းပါးကို ဖတ်ရှု လေ့လာပါ။ ၄င်းရဲ့လျို့ဝှက်ချက်က ကြက်ဥအနှစ်ရဲ့ အရောင်အဆင်းမှာ ရှိပါတယ်။ ကြက်ဥအနှစ်ရဲ့ ဝါဖျော့ဖျော့အရောင်နဲ့ အဝါရောင်က ဥဥသွားတဲ့ ကြက်မက […]
အဖေခေါ်ခ …တစ်​ရက်​ ၆၀၀ ကျပ် !!!
ရပ်ကွက်တစ်ခုမှာ..ကိုထွန်းနဲ့မကြည်ပြာ ဆိုတဲ့လင်မယား သားသမီးသုံးယောက် မွေးဖွားထားတယ်ပေါ့ ! ကိုထွန်းဟာ အရက်ကျွန်ဖြစ်သွားပြီ ! အရက်ကလွဲလို့ ..သူ့ဘဝမှာ ဘာမှမရှိ ! မကြည်ပြာကိုလည်း သူဂရုမစိုက်တော့ ! သားသမီးသုံးယောက်ကိုလည်း..စိတ် မဝင်စားတော့ ! သူသိတာက.. မကြည်ပြာဆီကရမဲ့ ..အရက် ဖိုး မနက် ၂၀၀၊ နေ့လည် […]